युगसम्बाद साप्ताहिक - प्रधानमन्त्रीको चेतावनी
Monday, 02.17.2020, 01:38pm (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 06.07.2011, 01:01pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । ‘भारतीय हस्तक्षेपबिना मुलुकभित्रैबाट बनेको सरकार’ भनेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएका झलनाथ खनालले गत मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता’को केही झलक दिन चुक्नुभएन । संविधानसभाको म्याद नथप्न दवाव दिने गरी भारतबाट कूटनीतिज्ञ तथा गुप्तचर संस्थाका अधिकारहरूको नेपाल प्रवेश र उनीहरूको चलखेललाई चिर्न सफल भएको लगत्तै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा "..... हाम्रो अस्थिरता र अविकासको दुष्चक्रको प्रभाव हाम्रा छिमेकीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत महंगो पर्ने तथ्य हामीभन्दा बढी उनीहरूलाई नै जानकारी छ ।" भन्दै भारतले नेपालमाथि अस्थिरता र अशान्ति मच्चाउन चालिरहेको कदमप्रति घुमाउरो पारामा चेतावनी दिनुभएको छ । विश्वव्यापीकरणको यो समयमा एक मुलुकको प्रभाव अर्को मुलुकमा पर्नु स्वाभाविकै भए पनि नेपालमा भारतले हस्तक्षेपकारी नीति लिएर दवाव सिर्जना गराउन अनेक तत्वहरूलाई परिचालन गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा उत्पन्न हुने अप्ठ्यारोले भारतलाई पनि छाड्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको ठहर थियो ।
सूत्रहरूका अनुसार संविधानसभाको म्याद थप्ने दिन संविधानसभाभित्र जेजस्तो दृश्य देखाप¥यो त्यसको एउटै कारण भनेको भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का अधिकारीहरूको चलखेल र दवाव नै हो । संविधानसभाबाट एकाएक पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित एमालेका तीन नेता केपी ओली, शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेल चार घण्टा हराउनु अहिले पनि शंकाको विषय बनिरहेको छ । उहाँहरू त्यो चार घण्टा कहाँ जानुभयो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा दिइएको छ । आफ्ना दश बुँदे माग पूरा नभए संविधानसभाको म्याद कुनै हालतमा थप्न नदिने अडानमा रहेको नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरू सोही मुद्दालाई लिएर अड्डी कसिरहेका थिए । पूर्व गृहमन्त्री तथा कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको आक्रोश पनि संविधानसभामा चर्चाको विषय बन्यो । सरकार र माओवादीसंग वार्तामा बसेका सिटौलाले कुनै हालतमा संविधानसभाको म्याद थप्न नहुने अडान लिएर आक्रोश पोख्न थालेपछि ‘रअ’को प्रभावलाई चिर्न कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले हतार हतार सहमतिका पाँच बुँदा तयार पारेर हस्ताक्षर गर्नुपरेको थियो ।
यसरी संविधानसभालाई मृत्यु शैयामा पु¥याउने रणनीतिक योजनाका साथ एक हप्ता अघिदेखि नै काठमाडौंमा डेरा जमाएर बसेका भारतीय जासुसहरूको अभीष्ट पूरा भएन । मुलुक दुर्घटनाको शिकार हुनबाट बच्यो । भारतीय चलखेलकै कारण अनगिन्ती समस्या उत्पन्न भएको र त्यस्तै माग र नारा लागिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो अस्थिरताले तिमीहरूलाई पनि छाड्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय नेताहरूकै आशीर्वाद र निर्देशन पर्खने मामलामा उहाँ पनि कम नभएको दावी गर्नेहरू पनि धेरै छन् । राष्ट्रियताको आन्दोलनमा होमिएको माओवादीको साथ पाएर मात्रै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो विषय उठाउनु भएको हो कि आत्मादेखि नै भन्ने कुरा आगामी दिनमा प्रष्टिने सूत्रहरू बताउँछन् ।
सभासद्हरूको भूमिका शून्य
काठमाडौं । एक युगमा एकचोटि आउने संविधानसभा निरर्थक बन्दै गएको आम अनुभूति छ । संविधानसभाको तीन वर्ष आठ दिनको कार्यकालमा संविधानसभाको बैठक बसेको गन्ती गर्ने हो भने लाजमर्दो स्थिति छ । संविधानसभा दलका नेताहरूले गरेको निर्णयमा लालमोहर लगाउने काममा मात्रै उपयोग भैरहेको छ । पछिल्लोपटक संविधानसभाको म्याद थपगर्ने बेलामा सभासद्हरूको हविगत देख्दा उनीहरूको हैसियत र भूमिकाका बारेमा अनेक टिप्पणी हुन थालेका छन् । सभासद्हरूले आफ्नो भूमिकाको खोजी किन गरेनन् भन्ने एकातिरको प्रश्न छ भने अर्कोतिर दलको बन्धनबाट उम्केर राष्ट्रिय स्वार्थको बन्धनमा बाँधिन नचाहने सभासद्हरू कार्यकर्ताभन्दा फरक हुन नसकेका कारण पनि उनीहरूको भूमिकालाई लत्याइएको हो । कुनै पनि सभासद्ले संविधानसभाको गरिमा र ऐतिहासिक महत्व कायम राख्न दवाव दिने प्रयास गरेको देखिएन ।
सूत्रहरूका अनुसार संविधानसभाको म्याद थपिंदैन भन्ने चिन्तामा रहेका ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले संविधानसभाको म्याद थप्ने र थपिएको अवधिभर तलब-भत्ता आधा मात्र लिने कुरा गरेका थिए । तर भएको पाँच बुँदे सहमतिमा त्यो विषयले प्रवेश नै पाएन । शीर्ष तीन दलका नेता मिलेर गरेको सहमतिलाई संविधानसभाका सदस्यहरूले आँखा चिम्लेर लालमोहर लगाउने काम भैरहेको छ । दलको एजेण्डाभन्दा माथि उठ्न नसकेका सभासद्हरूकै कारण तीन वर्षसम्म संविधानसभा नालायकहरूको भीड सावित भएको हो । राजनीतिक पूर्वाह र स्वार्थ छाडेर मुलुकको स्वार्थ हेरिएको भए अहिले मुलुकको परिस्थिति अर्कै भैसक्थ्यो । सभासद्हरूले आफ्नो भूमिका नै बिर्सेन पुगेका छन् । जनताको मत लिएर जनताको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने निर्णायक थलोमा पुगेका सभासद्हरूकै भविष्य निर्धारण तीन दलका तीन नेताले गर्ने भएपछि संविधानसभाको औचित्य कसरी स्थापित हुन्छ ?
त्यसो त सभासद्हरूले आफूहरूले तोकिएको समयमा तोकिएको काम गर्न नसकेको भन्दै कहीं कतै आत्मालोचना गरेको सुन्न पाइएको छैन । एउटा हातको औंलामा गन्न सकिने सभासद्हरूले मात्र सभासद् भत्ता नलिने निर्णय गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष दलित जनजाति पार्टीका सभासद् विशेन्द्र पासवानले दुई वर्षमा लिएको भत्ता-सुविधा संसद् सचिवालयमा बुझाएका थिए भने यस वर्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले संविधानसभाको थप अवधिभर आफ्ना सांसदले सदनमा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने र सांसदभत्ता नलिने निर्णय गरेको छ । अन्य कुनै पनि दल वा सभासद्हरूले त्यस्तो निर्णय गर्न सकेका छैनन् । अरु त अरु मुलुकको औद्योगिक घरानाबाट सभासद् भएकाहरूले समेत भत्ता-सुविधाको लोभ त्याग्न नसकेको देख्दा ‘धन देखेपछि महादेवको तेस्रो तेत्र खुल्छ’ भनेजस्तै हुन पुगेको ।
सूत्रहरू अगाडि भन्दछन् सभासद्हरूको भूमिका ल्याप्चे लगाउने मात्र हुन पुगेको छ । आफूलाई जान्ने-सुन्ने भन्ने सभासद्हरू पनि पार्टीको ह्वीप नाघेर स्वतन्त्र ढङ्गले शान्ति र संविधानको पक्षमा लाग्न सकेको अवस्था छैन । संचार माध्यमहरूमा चर्को कुरा गर्ने कतिपय सभासद्हरू संविधानसभा वा संसद्को बैठकमा अर्को पार्टीलाई गाली गलौज गर्न र आफ्नो पार्टीले राखेका धारणा नै सही भएको बताउन तल्लिन रहन्छन् । कुनै एउटाको दृष्टिकोण मात्र सही हुने हुन्थ्यो भने पञ्चायती व्यवस्था र सत्ता परिवर्तनको उपादेयता नै के रह्यो र ? परिवर्तन शब्दमा होइन व्यवहारमा नै हुनुपर्छ ।
रामदेवको अनशनमा बर्बर हमला (06.07.2011)
विद्युत विकासको नयाँ उपाय (06.07.2011)
राजनीतिक दुर्घटनाबाट मुलुक जोगियो (05.30.2011)